Nin oday ahaa oo lagu dilay Gobolka Hiiraan iyo raggii dilay oo baxsaday | Dhacdo
Home Wararka Maanta Nin oday ahaa oo lagu dilay Gobolka Hiiraan iyo raggii dilay oo...
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta nin oday ahaa lagu dilay duleedka Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Odayga oo lagu magacaabi jiray Geelle Faarax Orey ayaa waxaa lagu dilay halka loo yaqaano Dhisiqa, waana goobtii toddobaadkii hore ay ku wada dagaalameen Ciidanka Haramcad iyo maleeshiyo qaab beeleed u abaabulan.
Odayga oo xoolo dhaqato ahaa ayaa waxaa la sheegay in dabley hubeysani ay ku weerartay afaafka hore ee hoygiisa, dhawr xabadoodna ay huwisay.
Maleeshiyadan ayaa waxaa dilka ka dib la sheegay in ay goobtaasi ka baxsatay, ka hor intii aanay gaarin Ciidamada Dowladda ee Degmada Matabaan ku sugan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dilka odayga uu daba socdo dilka nin darawal ahaa saakay loogu gaystay deegaanka Riigga Ceel-habreed, oo ku dhow xadka uu Gobolka Hiiraan la leeyahay dalka Itoobiya. Marxuumka ayaana lagu magacaabi jiray Maxamed Khadar Xakiin, sida uu sheegay Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan, Cabdi Muumin Cilmi.
Dhanka kale gelinkii dambe ee maanta gaari nooca xamuulka ah oo maraayay inta u dhaxeyso Matabaan iyo Guriceel ayaa waxaa weeraray maleeshiyo beeleed. Maleeshiyadu waxay afduubatay dadkii gaarigaasi saarnaa.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dhalinyaro ka soo jeeda Guriceel oo ku sii jeeday Magaalada Muqdisho, lagala degay gaadiidkii ay ku safrayeen, xilli ay marayeen duleedka Beledweyne, inkastoo wadahadalo ka dib lagu guuleystay in ay dib xorriyadooda u hellaan.
Xiisadda beelaha ayaa waxay saamayn ku yeelatay gaadiidka xamuulka ee ganacsiga sida, iyadoo haatan ay gaadiid badan ku xaniban yihiin inta u dhaxeyso Matabaan iyo Beledweyne.
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo galabta gaaray Gaalkacyo (SAWIRRO)
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo waraaqaha ka guddoomay Safiiro (SAWIRRO)